काठमाडौं । मानिसहरुको दिमागमा प्राय यो प्रश्न उठ्ने गर्छ कि, किन सर्पको खुट्टा हुँदैन ? तर, यकिन जवाफ प्रायलाई थाहा छैन । यसैबीच सर्पका सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनले यो राज माथिको पर्दा उतारेको छ ।
वैज्ञानिकहरुले ९० वर्ष पूरानो सर्पको अवशेषबाट त्यसको विकासका बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकले आधुनिक सर्प र भेटिएको सर्पको अवशेषको सिटी स्क्यान गरेर अध्ययन गरेका थिए । त्यसपछि पत्ता लाग्यो सर्पको खुट्टा नहुनुमा उसका पूर्वजहरु जिम्मेवार छन् ।
एडिनबर्ग यूनिभर्सिटीका मुख्य अनुसन्धानकर्ता होंग्यु यी भन्छन्, ‘सर्पहरुले आफ्नो खुट्टा किन गुमाए ? यो विषय लामो समयदेखि वैज्ञानिकहरुलाई पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो । त्यसपछि हामीले यस विषयमा अध्ययन गर्यौं । अध्ययनबाट पत्ता लग्यो कि जब सर्पहरुले घिर्सिन र पानीमा तैरिन सुरु गरे, तब उनीहरुको खुट्टा प्रयोग हुन छाड्यो । लामो समय प्रयोगबिहीन भएपछि त्यो विस्तारै विकलाङ्ग बन्न थाल्यो । तब सन्तान/दरसन्तान हुँदैजाँदा खुट्टा नै गायव भयो ।’
वैज्ञानिकहरुले ३ मिटर लामो क्रेटेशियस सर्पको लोप भइसकेको प्रजाति डिनिलिसया पेटागोनिकाको शरीरका भित्री हड्डीको सिटी स्क्यान गरेर अनुसन्धान थालेका थिए ।
यसबाट थाहा भयो, आधुनिक सर्पहरुजस्तै डिनिलिसया पेटागोनिका पनि क्विटी र नलीबाट सुन्ने शक्तिलाई नियन्त्रित गर्ने गर्दथ्यो । वैज्ञानिकहरुले 3D मोडलको सहायताबाट सर्पका अवशेषहरुको कान र भित्री अंगहरुको आधुनिक सर्पहरुसँग तुलना गरेर अध्ययन गरे ।
त्यसक्रममा उनीहरुले सर्पको अवशेषको कानमा एक विशेष संरचना भेटे, जसले यिनीहरुलाई शिकार र शिकारीको बारेमा तत्काल सूचना दिन सक्थ्यो । यो संरचना भने पानी र जमिनमा रहने आधुनिक सर्पमा छैन ।
यस अध्ययनबाट सर्प सम्बन्धी अन्य कैयन तथ्यहरु पनि पत्ता लागेका छन् । यो अनुसन्धानको रिपोर्ट साइन्स एड्भान्सेज नामक पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।